🥇 ▷ Marvel wuxuu daaha ka qaadi doonaa labada qarsoon ee ugu waaweyn ee loo yaqaan 'Avengers': Endgame ' ✅
Marvel wuxuu daaha ka qaadi doonaa labada qarsoon ee ugu waaweyn ee loo yaqaan ‘Avengers’: Endgame ‘
Avengers: Endgame Waa filimka ugu sareeya ee taariikhda shineemada, marka lagu daro xaqiijinta in dhagaystayaashu ay awood u leeyihiin inay raacaan sheeko xariirooyinka oo dherer ahaan ah muddo toban sano ah, waxay na tustay awoodda superheroes-ka si ay u dhaqaajiso mala-awaalka qof walba.
Filimku wuxuu socdaa seddex saacadood wax badanna wuu bixiyay, marka lagu daro xiritaanka sheekooyinka Steve Rogers / Captain America iyo Tony Stark / Iron Man, wuxuu u dejinayaa masraxa adventures cusub. Laakiin waxa kale oo uu uga tagay dhawr waxyaalood oo qarsoon, qaarna waa la xaliyay iyo qaar aan badnayn.
Qaarkood waxay yeelan doonaan xallin ama jawaab ilaa waqti kadib markii Marvel Studios ay soo bandhigayaan taxanahooda cusub ama aflaanta bilaha / sannadaha soo socda.
Labada qarsoonba waxay quseeyaan Loki, yaa jooga Avengers: Infinity War wuxuu u dhintay Thanos laakiin gudaha Avengers: Endgame “soo noqday” markii ay u safreen wixii la soo dhaafay, 2012, waxay heleen ‘Cosmic Cube’ waana la waayey.
Marka su’aasha koowaad waa iska cadahay: Loki runtii miyey ku dhimatay labada filimba? Ma jiro jawaab la hubo, laakiin walaalaha Russo ayaa qeyb ahaan uga jawaabay bilo kahor hordhaca ah ee Endgame, markii lagu weydiiyey hal kalfadh haddii ay ka dhabeeyeen Bruce Banner.
Kooxda Russo ayaa wax laga weydiiyay aragtida taageere ee ah in Bruce Banner uu runtii Loki yahay mid muuqaal ah. Waxay ugu jawaabeen. Taasi “Loki waa dhintay.”
– Peter Sciretta (@slashfilm) Noofambar 29, 2018
Waxay ku jawaabeen “Loki wuu dhintay.” Laakiin tani waxay noqon kartaa taatiko si looga leexdo dareenka waxa ku dhici doona dabeecada bilo kadib markii la sii daayay. Endgame. Haa, wuu dhintay, laakiin si uun buu u joojiyey inuu baxsado, baaba’o oo uu yeesho awood uu ku safro waqtiga.
Qarsoodiga labaad ee inaga taga Endgame wali jawaabteedu waa: maxaad samaynaysaa Loki la Cosmic Cube oo sidee bay u saameyn doontaa xaqiiqada iyo tan hadda jirta?
Tom Hiddleston ayuu ku sharxay waraysi lala yeeshay Stephen Colbert in taas iyo su’aasha hore waxaa looga jawaabi doonaa taxanaha Disney Loki +. Waxa xun ayaa ah inaan sugno ilaa 2021 bilowgiisa.
Laakiin maxaa haa Waan ognahay inay taasi tahay waqtigaas Loki Wuxuu taabtay “Cosmic Cube” waana teleported, wuxuu abuuray xaqiiqo kale oo tan ah tan ugu weyn ee aan ku aragno filimada. Walaalaha Russo waxay ku sharraxeen wareysi lala yeeshay Ganacsade ganacsade waxaa laga yaabaa in la soo dhaafay:
Joe Russo: “Waqtiyada Loki uu sameeyo wax la mid ah sida si lama filaan ah isagoo ah helitaanka baraha ‘Space Gem iyo teleporting’, wuxuu abuurayaa run cusub.”
Anthony Russo: “Waxaan bilownay inaan la tacaalno fikradaha kala-duwanaanshaha iyo xaqiiqooyinka kaladuwan sidaas darteed haa, waxaa jira dhowr xaqiiqo ah.”
Waxaa la ogsoon yahay in taxanaha Loki ay jiraan safarro waqti, kaas oo xilligan aadan aqoon sida. Waa suurtogal inuu ku guuleysto isaga oo isku daraya safar safar – oo ay la socoto Cosmic Cube – oo ku xigta xaqiiqda Tufaax ee uu ogaanayo Ant-nin.